တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ဦးစားပေးမျှဝေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းပြော – Ever Best
တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ဦးစားပေးမျှဝေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းပြော
Ever Best | September 4, 2020 | News | No Comments
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် အောင်မြင်စွာထိုးနှံပြီးချိန် တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကာကွယ် ဆေးများ ဦးစားပေးမျှဝေရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ယန်ဂျီချီနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC)အဖွဲ့ဝင် ယန်မှပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သည် ယန်ဂျီချီနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC)ဗဟိုကော်မတီနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တို့ နှင့် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ သီးခြားတွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး တရုတ်နှင့် မြန်မာ အချင်းချင်းကူညီနေကြပြီး တရုတ်အနေဖြင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို အောင်မြင်စွာ ထိုးနှံပြီးချိန်တွင် မြန်မာနှင့် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ မျှဝေရန် ဦးစားပေး ဆန္ဒရှိကြောင်း ၎င်းမှပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး ၎င်းအနေနှင့် တရုတ်-မြန်မာ နှင့် အခြားဆက်စပ်သည့် ပါတီများကို တရုတ်-အာဆီယံနှင့် လန်ကန်-မဲခေါင်ဘောင်များအတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး COVID-19 နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်၊ တရုတ်၏ အဓိက စိတ်ဝင်စားမှု နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ ၎င်းမှမြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ အား လုံခြုံစွာ စောင့်ရှောက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မြန်မာ-တရုတ် စီးပွားရေး၊ ကော်ရစ်ဒါ ဆောက်လုပ်ရေး ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ကျော်လွှားရန် တရုတ်နှင့် အလုပ် လုပ်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ မြန်မာ-တရုတ် အသိုင်းအဝိုင်း တည်ဆောက်ရန် ဆန္ဒရှိ ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် တရုတ်ကိုအမြဲလိုအပ်ကြောင်းများ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်နမ့်စံမြို့နယ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နှီးဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ကိုဗစ် ၁၉ ပိုးဟာ ပိုက်ဆံမှ တစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သလား မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်( ပြန်လည်မျှဝေပေးကြဦးနော်)
ကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေမှုကို အကြောင်းပြပြီး မြန်မာကုန်ကားတွေ ဝင်ခွင့်မပြုတဲ့ ထိုင်းကို မြန်မာက ကုန်သွယ်ရေးတိုက်စစ်ပြန်ဆင်ပြီ
Vit. ဒီ. စီ နှင့် ဇင့် ဓာတ်ပါ ဆေးများ ကို တစ်နိုင်ငံလုံး သုံးရ မည်ဟု ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး ပြောကြား